Flickr ရှိ iPhone - ဓာတ်ပုံ ၁၅၀၀၀ ကျော်နှင့်မြင့်တက်လာသည် Martech Zone
Flickr on iPhone: ဓာတ်ပုံ ၁၅၀၀၀ ကျော်တက်လာသည်
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
iPhone ဖောင်းပွမှုအားလုံးနဲ့ (ငါတစ်ယောက်မှမရခဲ့ဘူး) Flickr ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူအများစုက iPhone ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ iPhone နဲ့အတူဓာတ်ပုံတွေတင်နေတာဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ Flickr တွင်တင်ထားသောမကြာသေးမီက iPhone ဓာတ်ပုံ ၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရသောအခါတုန်လှုပ်သွားသည်!
ငါ့ RSS စာဖတ်သူများအဘို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဆလိုက်ရှိုးကိုကြည့်ဖို့ post မှမှတဆင့်:
Apple Marketing အဖွဲ့သည်ဤဆုကြေးငွေကိုအမှန်တကယ်ရရှိထိုက်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု - တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအောင်မြင်မှုမရသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်
အမေဇုံ Associates မှဗဟိုကော်မရှင်ကဲ့သို့မကောင်း
1:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 28
iPhone မကြိုက်ဘူး။ ၎င်းကို မရရှိနိုင်သေးပါ (ကျွန်ုပ်နေထိုင်သည့်နေရာအတွက် - အနည်းဆုံး နောက်ထပ် 6-9 လအထိ)...
1:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 43
Apple က လူတွေကို သူတို့ရဲ့ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရာမှာ ထူးချွန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်သည့်နေရာတွင် Apple သည် 'အေးမြသော' ကို အာရုံစိုက်သည်။ စံနှုန်းကိုဆန့်ကျင်၍ 'ဆန္ဒ' နှင့် 'လိုအပ်ချက်' ကို အာရုံစိုက်ကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Apple သည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အရာများကို 'အလုပ်' လုပ်ခြင်း၏ အလွန်ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ပြီးပြီ။ Apple စက်မှာ ရယ်မောနေခဲ့တယ်။ အတော်လေး။
နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်… အခု ကျွန်တော့်မှာ AppleTV (ပုံမှန် TV လောက်ကြည့်တဲ့) MacBookPro၊ G3 (အကူအညီလိုတယ်) နဲ့ G4 (အကူအညီလိုတယ်)။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က Apple က ဘာမှ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။
iPhone ကို မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ရရှိနိုင်ဖို့ မစီစဉ်ထားပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် မတတ်နိုင်တော့တဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ ကဲ… အလုပ်ရှင်က အဲဒါကို ပြောင်းချင်ရင်…. 🙂
1:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 10
?ပြီးတော့ ထူးဆန်းတာက (ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ နှစ်အတော်ကြာအောင် အံ့သြနေတုန်းပါပဲ) iPhone မှာ G3 ထက် Processing Power ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (ပြောနေတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က G3 ကို ဘယ်လိုလက်ထဲ ရောက်သွားတာလဲ။)
Apple က "အေးတယ်" ထက် ပိုတယ်လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့က အမိုက်စား ဂီယာတွေ လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက် အဓိကအချက်က "ဒါက အလုပ်လုပ်တယ်"။ ၎င်းတို့သည် PC များကဲ့သို့ သဟဇာတမဖြစ်ဘဲ၊ သို့သော် သင်သည် ဘောက်စ်ပြင်ပမှ တစ်ခုခုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဘောင်များစွာကို သင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုပြောနိုင်သည်- Microsoft သည် အသုံးပြုသူအား ရွေးချယ်ခွင့်များစွာကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည် ကွန်ပျူတာများ၏ အတွင်းဘဝအကြောင်း နည်းပါးသည်ဟု Apple က ယုံကြည်သောကြောင့် Apple အင်ဂျင်နီယာများသည် သင့်အတွက် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးသည်။
အချို့သောအလုပ်များအတွက် Mac သည်ပိုကောင်းသည်၊ အခြားသူများအတွက်၎င်းသည် PC ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ နှောင်းပိုင်းတွင် လိုင်းများ ပိုမိုမှုန်ဝါးလာသည်။
KIA နဲ့ Mercedes နှစ်မျိုးလုံးက သင့်ကို A ကနေ B အထိ ပေးပါတယ်..နောက်တစ်ခုက နည်းနည်းပိုသက်သာပါတယ်…
2:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 15
ကောင်းပြီထား။ (မကြာသေးမီက ကျွန်တော် G3 နှင့် G4 ကိုရခဲ့သည် - ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီး ၊ ဒါပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ရဖို့ အလုပ်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်... နောက်ပြီး မော်နီတာတွေ၊ ကီးဘုတ်တွေလိုတယ်... အဲဒါတွေကို သွားဖို့ ကျွန်မမှာ အချိန်မရှိသေးပါဘူး။ )
2:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 20
ဟုတ်ပါတယ်၊ Apple က IBM/Lenovo Thinkpads အတွက် ဥပမာအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အရာတွေကို "အေး" အောင်လုပ်တယ်၊ ရိုးရိုး "အလုပ်" နဲ့ "work" က "cool" နဲ့ အများကြီးကွာခြားပါတယ်🙂
2:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 52
?ဒါက မင်းရဲ့အလုပ်​အ​ပေါ် မူတည်​တယ်​
(အဲဒါက Apple Campaign မှာ ကစားနေတာလို့ ထင်ပါတယ်။)
2:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 20
အရင်တုန်းက Thinkpad တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး အရမ်းမိုက်တယ်။ အဲဒါက အုတ်ခဲတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ Operating System3ခု (Windows 2000၊ Win 98 နဲ့ OS/2) ရှိတယ်။ မြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများ။ ကျွန်ုပ်တွင် ယခု MacBookPro တစ်လုံးရှိပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်ရှိဖူးသမျှတွင် အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့တစ်လုံးဖြစ်သည် - ဆိုင်တွင် ရက်အနည်းငယ်ကြာထားရန် စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သော်လည်း၊ (Apple က အဲဒါကို လှည့်စားတာ အရမ်းမြန်တယ် - ကျွန်တော် သဘောကျမိတယ်)။
5:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 43
ဟယ်။ ပုံတွေ အများကြီးပဲ O_O